Soo dhawayn iyo maamuus loo sameeyay ard-aydii Jaamacadda Muqdisho ee ka qayb gas-hay tartankii dood cilmiyeedka ee Doxa-Qadar |
Soo dhawayn iyo maamuus loo sameeyay ard-aydii Jaamacadda Muqdisho ee ka qayb gas-hay tartankii dood cilmiyeedka ee Doxa-Qadar
Waxaa dalka dib ugusoo laabtay ardaydii Jaamacadda Muqdisho ee kasoo qayb gashay tartan dood cilmiyeed ay ka qayb galeen 46 dal iyo 88 Jaamacadood ee lagu qabtay Dooxa dalka Qadar.
Tartarnka dood cilmiyeedka ah waxaa dalka Soomaaliya ku matalayay ardayda Jaamacadda Muqdisho oo guulo wax ku ool kasoo hooyay.
Ustaad Muuse Axmed Cabdullaahi madaxa xafiiska ardayda Jaamacadda Muqdisho ayaa tilmaamay nidaamka loo qaybinaayo dooda ay ahayd adiga oo kujira garoon ciyaareed adigoo difaacanaysid in lagaa dhaliyo gool laakiin aadan gaysaneenin wax dhibaata ah adigoo adeegsanaya xirfadaada iyo kartidaada.
Dhinaca kale waxay ardayda ay kasoo faa’idaysteen koorasyo dhinacyo badan taabanayay waxaana ugu muhiimsanaa sida loola tacaalumo dhanka warbaahinta oo ay siiyeen TV-ga caalamiga ee Al-Jaziira qubaro kasocotay.
Laba kamid ah ardayda kasoo qayb gashay tartanka dood cilmiyeedka Axmed Cabdirasaaq Cali iyo Saara Cabdalla Muusa ayaa sheegeen inay u mahad celinayaan maamulka Jaamacadda Muqdisho iyo barayaasha kutababaray inay nasiib u helaan inay kaqayb galeen doodaan qiimaha badan.
“Dawladaha qaarkood aan kala qayb galnay dooda ayaa markii hore aan aminsanayn inaan ku hadli karno luqada carabiga laakiin dooda markii ay dhamaato ayaa waxay noo muujinaayeen tixgalin dheeri ah iyo inay xiriiro nala samayn doonaan” ayay sii raaciyeen kaqayb galayaashii uhadlayay ardayda.
Ustaad Aadan Axmed Xuseen (Xerow) oo kamid ah musuuliyiinta Jaamacadda Muqdisho ayaa umahad celiyay ardayda kasoo qayb gashay tartanka dood cilmiyeedka lagu qabtay dalka Qatar waxuuna ku amaanay kaalinta muuqata ee ay kulahaayeen wuxuuna u rajeeyay inay dadaalkooda halkaa kasii wadaan khibradihii aykasoo qaateenna ay u gudbiyaan ardada kale ee aan xaadirin goobtaas.
Jaamacadda Muqdisho ayaa ah Jaamacad marwalba kafikirta waxyaabaha wanaaga leh ama horumarka leh ee lagu horumarinayo dadka iyo dalka Soomaaliyeed.